Resaky ny mpitsimpona akotry : fFanomezan-dàlana hibahan-toerana fijanonana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fFanomezan-dàlana hibahan-toerana fijanonana
Maro ny mpamitaka sy mpandainga am-pahibemaso amin’ny fametahana soratra amin’ireny takela-by fibahanana ny toerana voatokana manambara ny fahazoana didy avy amin’ny Kaominina mametra faritra manokana. Ahoana moa no ahafahana mamantatra ny fahamarinan’ireny fanomezan-dàlana izay milaza fa eny amin’ny faritra voarara ametrahana fiara no nanomezan’ny tompom-pahefana toerana manokana ny fiara sasantsasany ? Ny didy voalaza ho napetraky ny mpitantana no lainga sa ireo mpitantana no manaotao fahatany toy ny ankizy mora irahana rehefa mahita vatomamy ? Sa efa misy mihitsy ny tsikombakomba tsy an-kiteniteny fa samy manao izay saim-pantany ny rehetra rehefa mandoa “ekôlazy”, rehefa mandalo ny mpanangona izany.
Mampiantso izao ny manam-pahefana, tena mahefa, fa misokatra ny fametrahana fangatahana ahazoana fanomezan-dàlana ho an’ny “parking réservé”. Iny izany no vola madio anjaran’ny Kaominina. Tsotra ny fanontaniana. Moa ve ampy izay ho an’ny fitantanana manaram-penitra, sa tokony ataony adidy koa ny manara-maso ny fampiharana mba tsy hijoroan’ny takela-by milaza sandoka eo an-kilan’ny fanomezan-dàlana tena izy? Ny fitazana ny fanirin’ny “parking réservé” toy ny anana dia mitarika fakam-panahy amin’ny fanendrikendrehana momba ny fanomezana alàlana ny sasany handranto ny anjarany amin’ny fandraisana vola malotoloto sandan’ny fikipiana tsy hanebaka ny filazana fahazoan-dàlana izay fantatra fa sandoka.
Tsy menatra intsony ny sasany amin’ny fanaovana zavatra tsy mendrika toy izany. Matetika aza ireo manam-pahasahiana amin’ny fanaovana izany dia jejo mihitsy toy ny fahavitana hetsika mendrika deradera. Ny maloto lasa mahazo hoby sy tehaka rehefa ny hafetsifetsena no fetra fitsarana ary tsy misy intsony izany hoe “hafetsen-dratsy” izany fa rehefa hafetsena dia tsara avokoa.
Mahazo vahana noho izany ny fitaka. Angamba tsy hapetraka intsony ny fanavahana ny fitapitaka madinika sy ny famarinana an-kady sy fandefonana ivoho, hany fantatra dia izay nahavoa ihany no voanjo manga. Aza mba sendra ny goavy manta, sady mizaka ny vesatra no ihomehezan’izay mahatazana.